Soo Dhaweyntii Cabdalla Axmed Saalim "Saalimow" ee Toronto
Waxaa xaflad soo dhaweyn ah maqaayada Daba Gooye loogu qabtay ciyaartoygii hore ee kooxda Gadiidka iyo gobolka jubada hoose Cabdalla Saalim “Saalimow”.
Xafladan ayaa waxaa si weyn usoo qaban qaabiyay Faris Charles, Nuuraye, Suldaanka Bajuunta Mudane Cumar Maxadi C/Qaadir, Cabdi Maxadi C/Qaadir, iyo Xamadi Bakri (Ciyaartooygii kooxda Jubadda hoose).
Xafladan oo jawi qurxoon ku dhacday ayaa waxaa ka soo qeygalay dad aad u tiro badan oo ay u badan yihiin bahweynta sportige ee Toronto.
TAARIIKH CIYAAREEDKII SAALIMOW OO KOOBAN
Cabdalla Saalim Cabdulqaadir oo ku magac dheer Saalimow, wuxuu ku dhashay magaalada Kismayo
Saalimow yarantii ayuu aad u jeclaa kubadda cagta wuxuu ku ciyaari jiray xeebta iyo xaafadaha.
Sannadkii 1969 kii ayuu markii ugu horeeysay garoon galay isagoo u ciyaaray kooxdii la oran jiray BB oo ahayd koox reerka 2aad (SerieB) ah kana dhisan Kismayo.
1970 ayaa kooxdan loo bixiyay magaca ENB Ente Banana. Isla sannadan ayaa kooxdani ay ku guuleysatay koobkii iyadoo ciyaartii finalka ay isaga horyimadeen kooxda Dekadaha. Ciyaartani ayaa waxay ka dhacday garoonka Wamo.
Sannadkii 1976dii ayuu Saalimow ku biiray kooxda Dekadaha ee magaalada Kismayo, isagoo heshiis hal sanno ah la galay.
Isla sannadkii 1976 bishii seddaxaad ayuu Saalimow ka mid noqday ciyaartooydii gobalka Jubbada hoose, iyagoo koobkii ciyaaraha gobolada ku guuleystay.
Markii ay dhamadeen ciyaaraha gobolada ayaa Saalimow waxaa qaadatay kooxda Dowladda hoose (Munishiibiyo) ee heerka kowaad (Serie A). Arritani ayaa waxaa si weyn uga soo horjeesatay kooxda Dekadaha ee Kismayo oo sheegtay inuu ciyaartooygani hal sanno heshiis ah la saxiixday, sidaa daraadeedna aanu koox kale u ciyaari karin.
Kooxda Dekadda ayaa Saalimow u sheegtay haddii uu rabo inuu ka ciyaaro ciyaaraha heerka kowaad ee Muqdisho, kooxda keliya ee uu u ciyaari karo iney tahay kooxda Dekadaha ee Muqdisho.
Saalimow wuu diiday inuu u ciyaaro kooxda Dekadaha, sida daradeed isaga iyo Munishiibiyo waxay go’aansadeen inta laga gaarayo 1977 oo ah xiliga uu ka dhacayo heshiiska uu kula jiro kooxda Dekadaha inuu iskala jii joogo kooxda Munishiibiyo mishaarkiisana qaata isagoon ciyaarin.
Dhamadkii 1976dii ayaa guddoomiyaha kooxda Munishiibiyo loo magacaabay nin la oran jiray Jimcale Xaayow. Jimcaale ayaa Saalimow u sheegay inuu u ciyaaro kooxda heerka labaad ee Munishiibiyo.
Saalimow ayaa la tashtay Karaama dhagey. Karaamana wuxuu kula taliyay inaanu dib ugu soo noqon Serie B. Sida awgeed Saalimwo wuu diiday inuu u ciyaaro kooxda Serie Bda.
Saalimow wuxuu codsaday in la fasaxo balse waa loo diiday.
Sannadkii 1979kii ayuu u dhoofay dalka Sacuudiga.
1980 ayuu dib ugu soo laabtay dalka isagoo ka mid noqday ciyaartooyda kooxda Gadiidka ee heerka kowaad (Serie A) ee uu markaasi tababare u ahaa Cabdixamiid Yacquub Saalim tababre ku xigeena ka ahaa Mansuur Axmed Saciid.
Saalimow wuxuu kooxda Gadiidka ka tirsanaa ilaa iyo sannadkii 1985tii isagoo guul badan la qeybsaday kooxdiisa.
Sannadkii 1986 ayuu haddana u dhoofay magaalda Adan ee dalka Yemen, wuxuuna ku biiray kooxda Al-Shacab. Kooxdan ayaa iyadu ahayd koox aad u liidatay intaanu ku biirin Saalimow.
Wareegii kowaad ee horyaalka waxaa kooxdan 6-0 kaga badisay kooxda Abyan Casan.
Wareegii labaad markii uu kooxda kusoo biiray Saalimow kooxda Al-Shacab waxay Abyan kaga badiyeen 1-0, iyadoo weliba Saalimow uu goolka guusha dhaliyay.
Sannadkii 1988dii ayuu Saalimow ciyaaraha ka fariistay isagoo markale kusoo laabtay Muqdisho.
Dagaalka kadib wuxuu u dhoofay Kenya isagoo halkaasi joogay ilaa iyo sannadkani 2013 ee uu soo galay Canada.
Haddeer Saalimow wuxuu ku nool yahay magaalada vancouver ee wadkana Canada